Sir fashilantay iyo khiyaanada xisbi xaakimka Kulmiye. • Oodweynenews.com Oodweyne News
Sir fashilantay iyo khiyaanada xisbi xaakimka Kulmiye.
dawladMay 7, 2018
Salamu calaykum waraxmatulaahi wa barakatu,
Dhamaan Dadweynaha reer Somaliland ee ku kala nool dafaha dunida, waxaan halkan ugu soo gudbineynaa warbixin iyo xog rasmi ah oo aanu ka helnay bogiisa Facebook Gudoomiyaha Xisbiga Kulmiye ee dalka HOLLAND.
Booqashadii ra’isal wasaaraha dawlada Xamar ku yimid waddanka Beljimka oo uu weydiisanayey sidii looga caawin lahaa ciidamada loo dhisayo Somaliya.
Hadaba waxaa naxdin leh xaqiiqaana ah in xisbiga talada dalka haya ee Kulmiye oo mikirifoonka meel walba la taagan in xisbiga Waddani uu shicibka reer Somaliland ku wado inuu Xamar geynayo oo uu ka leexday gooni isu taag Somaliland.
Ayaa warkaasi hada ku cadaaday xisbiga Kulmiye inuu isagu meel walba si qarsoodi ah ugu dhuumanyo madaxda Xamar ka tallisa.
Waxaana la kulmay oo soo dhaweeyey Ra’isal wasaare Khayre Wakiilka ama Gudoomiyaha xisbiga Kulmiye ee dalka HOLLAND Md. KHADAR SUULEYMAN ( XASAN CADE) oo sawiradii uu kula galay Bruxel caasimada dalka Beljimka , aanu halkan idiinku soo gudbineynaa.
Haddaba arinkaasi miyaanu ahayn khiyaamo qaran oo lagu sameeyey shacbiga daacada ah ee reer Somaliland oo xoriyadooda iyo madax banaanidooda haystey mudo 27 sano ah bilaa shuruudna la rabo in Xamar lagu celiyo .
Xafiska Guud ee xisbiga Waddani Dalka HOLLAND.